Global Voices teny Malagasy » Ny Fifaharany Syriana : Fandraisampeo Mankany Amin’ny Lalina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Febroary 2017 4:25 GMT 1	 · Mpanoratra Sahar Habib Ghazi, L. Finch Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Syria, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Vehivavy sy Miralenta, Global Voices Podcast
Maha-lasa adala ny lanjan'ny krizy sy ny fandringanana ao Syria . “Toeram-pamonoana, faharavana tanteraka ny maha olombelona, ny faratampony amin'ny horohoro” no hita ao amin'ny firenena araka ny nolazain'ny manampahefana iray ao amin'ny Firenena Mikambana . 
Olona efa ho dimy hetsy no maty tamin'ny ady; noterena handao ny fonenany ny antsasaky ny mponina miisa 22 tapitrisa ao amin'ny firenena. Nilaza ny Foibe Fikarohana Ara-politika fa na naratra na maty ny 11.5% -n'ny olona amin'ny fitambaran'ny mponina Syriana . Vao haingana, namoaka tatitra ny Amnesty International fa Syriana miisa 13.000 no nahantona tany amin'ny fonja miaramila iray teo anelanelan'ny taona 2011 sy ny taona 2015. Dokotera, mpisolovava, mpikatroka , raim-pianakaviana, vady sy zanakalahy avokoa izy ireo.
Amin'ity fizaran-tantara Mankany Amin'ny Lalina ity, misy ny fandraisam-peo Global Voices mangady lalina lohahevitra iray izay tsy hita amin'ny fampitam-baovao mendrika azy, mandalina any amin'ny fifaharana ao Syria isika .
Angamba mety ho ady tena nanatantara indrindra teo amin'ny tantara  ny ady an-trano Syriana izay ao anatin'ny faha-enintaonany ankehitriny. Fa mety ho ilay tena mampisafotofoto indrindra ho an'ny olona ivelan'ny firenena ihany koa .
Ho hitantsika ny sioka mahavaky fo  avy amin'ny zazavavy Syriana iray 7 taona atao hoe Bana any Atsinanan'i Aleppo natao fahirano, ary avy eo isika hijery ny namantsika mizara ny lahatsoratra vaovao izay milaza amintsika fa tsy misy i Bana fa fitaovana fampielezan-kevitra noforonin'ny Tandrefana.
Atao misy i Bana. Voamarina tamin'ny fampitahana  azy ireo avy amin'ny sarin'ny zanabolana ny lahatsary momba azy. Nanamafy ihany koa  tamin'ny Guardian  sy ny New York Times tamin'ny alalan'ny Skype sy ny WhatsApp ireo mpikatroka atokisana sy dokotera miasa any amin'ny faritra atsinanan'i Aleppo, fa araka ny nolazaina i Bana sy ny reniny. Sary an-tapitrisany , horonantsary, bilaogy, sioka ary rakipeo momba ny ady no nozaraina tao amin'ny media sosialy. Nisy tamin'ireo no nampifandraisin'ny fikambanam-pamoaham-baovao tamin'ny zava-misy ary ny sasany tamin'izany efa noesorin'ny milina fampielezan-kevitra tsy hifandraika amin'ny zavamisy.
Noho izany ahoana no ataontsika manoloana ny vaovao sy ny fampielezan-kevitra rehetra ?
Mitodika any amin'i Marcell Shehwaro hatrany izahay ato amin'ny Global Voices rehefa te-hahatakatra ny zava-mitranga marina any Syria. Izy ilay bilaogera 32 taona sady mpikatroka avy any Aleppo, Syria.
Namoaka andian-dahatsoratra fampahatsiahivana ho an'ny Global Voices i Marcell hatramin'ny taona 2014, izay nantsoina hoe ” Tapatapany avy any Syria “, izay namariparitany ny fiainany tao Aleppo sy ny mety hanaovany sesitany ny tenany ivelan'i Syria. Tamin'ny taona 2015, nahazo ny Lokan'ny Fanaovan-gazety An-tserasera taona 2015 ireo andian-dahatsoratra ireo. Nidera ny “lahatsorany manokana mahery vaika” ny mpitsara rehefa nahita “ny faritra volondavenona tao amin'ny ady izay matetika notantaraina tamin'ny loko mainty na fotsy fotsiny.”
Amin'ity fizaran-tantara ity izy miaraka tamin'i Joey Ayoub , toniandahatsoratr'i Global Voices any Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra, izay manampy antsika hahatakatra ny fomba fijerin'ireo Syriana miatrika ady amin'ny alalan'ny fomba fijery sy ny fanoratr'i Marcell.
Nahatonga izao fizaran-tantara izao ho tanteraka ny asa feno aingam-panahy an'ireo mpanoratra, mpandika lahatsoratra ary tonian-dahatsoratra eto amin'ny Global Voices rehetra. Noho izany, fisaorana lehibe ho anareo rehetra any izany.
Amin'ity fizaran-tantara ity, asongadinay ireo hira manana lisansa Creative Commons avy ao amin'ny Arisivan'ny Mozika Maimaimpoana [malalaka], ka anisan'izany ny The Telling sy Parisa, avy amin'ny Blue Dot Sessions avokoa ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/02/18/95727/
 manampahefana iray ao amin'ny Firenena Mikambana .: https://news.vice.com/story/complete-meltdown-of-humanity-in-aleppo-assads-forces-are-reportedly-killing-civilians-in-their-homes
 Syriana miisa 13.000 no nahantona tany amin'ny fonja miaramila : https://www.nytimes.com/2017/02/06/world/middleeast/syria-prison-amnesty-international.html
 tena nanatantara indrindra teo amin'ny tantara: https://globalvoices.org/2016/12/27/syrias-war-may-be-the-most-documented-ever-and-yet-we-know-so-little/
 sioka mahavaky fo: https://twitter.com/alabedbana
 Voamarina tamin'ny fampitahana: https://www.nytimes.com/2016/12/07/world/middleeast/aleppo-twitter-girl-syria.html?_r=0
 Nanamafy ihany koa: https://www.theguardian.com/world/2016/dec/19/where-is-bana-girl-who-tweeted-from-aleppo-is-safely-evacuated
 Tapatapany avy any Syria: https://globalvoices.org/specialcoverage/dispatches-from-syriamarcell-shehwaro-on-life-in-aleppo/